PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-20 - KUQAQAMBA INHLIZIYO KOXOSHWE YI-CHIEFS
KUQAQAMBA INHLIZIYO KOXOSHWE YI-CHIEFS
Ilanga langeSonto - 2017-08-20 - Front Page - SENZO SOKHELA
KUQAQAMBA inhliziyo uma ecabanga ngobuhlungu abuzwiswe yikaizer Chiefs umdlali omusha webloemfontein Celtic.
Ichiefs izogadulisana nebloemfontein Celtic kowe-absa Premiership namuhla ngesonto ngo15h00 efree State Stadium.
Ulucky Baloyi osesemabhukwini eceltic, ukhonjwe indlela yiChiefs ingakaqali kwakuqala isizini. Uxoshwa nje, ubesanda kuvuselela inkontileka ngeminyaka emibili kule kilabhu yasenaturena. Utakulwe yiceltic emsayinise inkontileka yeminyaka emithathu.
Lo mdlali uthi namanje akakakholwa ukuthi ichiefs imdalakaxe okwenyongo yenyathi.
“Ichiefs ngikhulele kuyona, indlela engihambise ngayo bengingayilindele kodwa ngiyamukelile ngoba izinto ezinjena ziyenzeka ebholeni. Okungiphatha kabuhlungu wukuthi kangizange ngilinikwe ithuba ngokwanele, bekuthi uma ingidlalisile nginconywe yibo bonke abantu kodwa emdlalweni olandelayo ngilahlelwe ebhentshini kumbe ezihlwele- ni.
“Nokho-ke senginekhaya elisha manje kufanele ngiyisebenzele iceltic. Kulo mdlalo uma ngilinikiwe ithuba kangifuni ukuzifakela ingcindezi ngizokwenza engikwaziyo. Kuzongijabulisa ukuthi siyehlule ichiefs, kangiphathi uma ngingase ngishaye igoli kuzongithokozisa ngendlela eyisimanga lokho,” kusho ubaloyi.
U-itumeleng Khune ongunozinti wechiefs, uthi kuzofanele bavuke emaqandeni.
“Iceltic ngeke ibe lula neze. Uma idlalela ekhaya iba nabalandeli abaningi. Kuzofanele siphaphame uma sifuna ukuyehlula namathuba esizowathola siwasebenzise. Kubalulekile ukuthi siyiqale kahle iligi ngokunqoba yingakho sizokwenza ngawo wonke amandla ukuthi siyawunqoba lo mdlalo,” kusho ukhune.
Khonamanjalo, iplatinum Stars esanda kuveza ukuthi ingase ilidayise ilungelo layo lokudlala kwipremiership ngenxa yokudonsa kanzima kwezomnotho, izodudulana nemaritzburg United koweligi namuhla ngesonto ngo15h00 eroyal Bafokeng Stadium, erustenburg.
Ichiefs ngikhulele kuyona, indlela engihambise ngayo bengingayilindele...